आज Iphone6आउदै -एक महिना पछि Samsung ले Galaxy Alpha ल्याएर टक्कर दिदै- I phone6VS Galaxy Alpha-Who will be winner? ~ Khabardari.com
आज Iphone6आउदै -एक महिना पछि Samsung ले Galaxy Alpha ल्याएर टक्कर दिदै- I phone6VS Galaxy Alpha-Who will be winner?
एप्पलको आइफोन6आज बजारमा आउदै, स्वास्थ्य अनुगमन, घरमा प्रबन्ध र सरसामानकिन्नको सहयोगी किन्न सुसज्जित एक smartwatch हुन इत्तला - एप्पल पछि यसको अर्को ठूलो कुरा प्रकट गर्न सेट गरिएको छ ।
विश्लेषकहरुको पहिले नै iWatch डब छन् जो smartwatch , लगभग चार र एक वर्ष पहिले आईप्याडका देखि एप्पल पहिलो नयाँ उत्पादन हुनेछ ।
कम्प्यूटर र सफ्टवेयर विशाल पनि नयाँ iOS 8 सञ्चालन प्रणाली चलिरहेको , अद्यावधिक iPhone मोडेल पुष्टि गर्न अपेक्षा गरिएको छ।
यसको उद्घाटन हेर्न एप्पलको साइट मै गएर काउन्ट डाउन हेर्नुस Live!
आज स्याउ यानिकी एप्पलको डेढ वर्ष पछि नया उत्पादन आइ वाच र आइ ओ एस ८ संग संगै रिलिज हुने हल्ला खल्ला छ
यी फोटा यस्तो हुने छ भन्ने सम्भाना मात्र हुन्
अब कम्पनि अगाडी धर्ना कसेर बस्ने हरुको फोटा हेर्ने भए यस्तो ख Apple फ्यान भएपछि हावा दिन पर्यो नि!
यी च्यांग चुङ्ग महासयले Apple iphone6 यस्तो हुने भनेर धेरै पहिला भिडिओ हालिसकेका छन्
मोबाइल बजारमा सामसुङ र एप्पलको प्रतिस्पर्धा रमोञ्चक बन्ने गरेको छ । एप्पलको आईडिया चोरेको आरोप खेप्दै आएको सामसुङले उसको बजार खोस्न अनेक रणनीति अपनाउदै आएको छ । एप्पलले अबको केही समयपछि नै आइफोन ६ सार्वजनिक गर्ने खबर सार्वजनिक भएपछि सामसुङले पनि उसैलाई टक्कर दिन अर्को उत्पादनको तयारी गरेको रहस्योद्घाटन भएको छ । कोरियन कम्पनीले अर्को महिना नै उच्चस्तरीय स्मार्टफोन बजारमा ल्याउँदैछ ।
ग्यालेक्सी अल्फा नाम दिइएको नयाँ स्मार्टफोन एप्पलको आईफोन ६ को प्रतिस्पर्धीको रुपमा बजारमा ल्याउन लागेको हो । गत अप्रिलमा ल्यालेक्सी एस ५ लञ्न गरेको सामसुङले एप्पलले नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले नै आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाउन खोजेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ग्यालेक्सी अल्फामा एस ५ र ग्यालेक्सी नोटको सुविधा राखिने बताइएको छ ।
Posted in: information,iphone,samsung,technology